Igumbi lokulala elithandekayo lamawele efulethini elibanzi. - I-Airbnb
Igumbi lokulala elithandekayo lamawele efulethini elibanzi.
Le ndawo isendaweni encane yokuhlala, ekwazi ukufinyelela kumachibi okubhukuda ama-4 (amachibi amabili amakhulu, i-plunge pool kanye nechibi lezingane), isitolo esikhulu esigcwele esizeni kanye nenkundla yokudlala yezingane. Ifulethi lisendaweni ekahle enkabeni yendawo enkulu yaseSharm El Sheikh - phakathi kweNaama Bay ne-Old Market. I-Sharm El Sheikh Museum, i-Naama Bay, i-Hadaba, i-Hay El Nour, i-Old Market kanye nawo wonke amabhishi atholakala kalula ngebhasi lendawo noma itekisi.
Amakamelo okulala avulekile, indawo yokuphumula ingamamitha-skwele angama-25, inosofa aba-2 abangaqhelelana kalula ngamamitha ama-2. Igumbi lokulala eliphindwe kabili linendlu yokugezela eyi-ensuite, okusho ukuthi igumbi lokugezela elikhulu cishe lisetshenziswa kuphela abantu abahlala egunjini lamawele. Siyajabula ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwekhishi ukuze womabili amasethi ezivakashi abe nesikhathi sawo esikhethekile sokulungiselela ukudla, njll. Konke lokhu kusho ukuthi ukuqhelelana komphakathi kungenzeka kalula, ngisho nangaphakathi endlini yethu. Kodwa-ke, uma noma yisiphi isivakashi esikhathazeke ngokuqhubekayo nge-Covid kanye nokuncishiswa komphakathi , singajabula ukucabangela ukuvimba igumbi lesibili ngo-50% wezinga elijwayelekile legumbi ukuze siqinisekise ukuthi iqembu lakho linokufinyelela okukhethekile. Sicela uqaphele ukuthi lokhu akunikezi izivakashi igunya lokusebenzisa igumbi lokulala lesibili.
Mina nomyeni wami asihlali efulethini, kodwa sigcina igumbi elilodwa njengehhovisi. Kungenzeka ukuthi oyedwa noma sobabili sikhona emini, kodwa ngaphandle kwalokho, leli fulethi labelwa kuphela phakathi kwamaqoqo amabili ezivakashi ezihlala kulawa magumbi amabili okulala esiwabalile. Sijabula kakhulu ukwamukela izivakashi, ezamukeleke kakhulu ukusebenzisa zonke izinsiza endaweni yokuphumula nekhishi. Ikhishi lifakwe isiqandisi sefriji, 4 ring gas hob kanye nohhavini omncane. Kukhona nomshini wokuwasha kanye nokufinyelela emanzini okuphuza ahlungiwe, kokubili ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe. Sine-inthanethi yocingo lwasendlini, ngokuvamile okuyindlela engcono kakhulu nengaguquguquki yokufinyelela i-inthanethi e-Sharm. Ngiyisebenzisele ukufundisa nge-inthanethi esikhathini esedlule ngaphandle kwezinkinga.
Sijabule kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi sisendaweni noma cha, ukunikeza noma yiluphi ulwazi esingakwazi mayelana nendawo yendawo; cishe asisekho umlayezo noma ucingo! Ngohlelo lwangaphambili nangemali efanelekile (engaphansi kwamatekisi endawo), singahlinzeka ngokudluliswa kwezindiza esikhumulweni sezindiza, futhi mina nomyeni wami singakuyisa ohambweni lokuthenga, njll. ukuze sisize ngokuhumusha futhi sithole amadili angcono kakhulu. Siyalithanda ikhaya lethu futhi sifuna uhlale kahle lapha; noma yini esingayenza ukusiza kuyinjabulo yethu!
Amakamelo okulala avulekile, indawo yokuphumula ingamamitha-skwele angama-25, inosofa aba-2 abangaqhelelana kalula ngamamitha ama-2. Igumbi lokulala eliphindwe kabili linegumbi lokugezela eline-ensuite, okusho ukuthi igumbi lokugezela eliyinhloko cishe lisetshenziswa kuphela abahlali begumbi lamawele. Siyajabula ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwekhishi ukuze womabili amasethi ezivakashi abe nesikhathi sawo esikhethekile sokulungiselela ukudla, njll. Konke lokhu kusho ukuthi ukuqhelelana komphakathi kungenzeka kalula, ngisho nangaphakathi endlini yethu. Kodwa-ke, uma noma yisiphi isivakashi esikhathazeke ngokuqhubekayo nge-Covid kanye nokuncishiswa komphakathi , singajabula ukucabangela ukuvimba igumbi lesibili ngo-50% wezinga elijwayelekile legumbi ukuze siqinisekise ukuthi iqembu lakho linokufinyelela okukhethekile. Sicela uqaphele ukuthi lokhu akunikezi izivakashi igunya lokusebenzisa igumbi lokulala lesibili.
Mina nomyeni wami asihlali efulethini, kodwa sigcina igumbi elilodwa njengehhovisi. Kungenzeka ukuthi oyedwa noma sobabili sikhona emini, kodwa ngaphandle kwalokho, leli fulethi la…